Sakafo kaloria 500 ... Nosedraina! ary miasa | Nutri Diet
Ny paoma dia ao anatin'ny sakafo
La Sakafo 500 kaloria Natao ho an'ireo mila very kilao maro izy io. Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa sakafo izay tsy tokony hatao raha tsy atao ambony indrindra Andro iray isan-kerinandroSatria tsy miorina amin'ny kaloria 500 fotsiny isan'andro dia tsy afaka atao isan'andro izany satria ratsy amin'ny fahasalamanao izany ary mety harary ianao.
Ity regimen ity dia matetika atao ny ampitso aorian'ny fihoaram-pefy sasany, toy ny karazana fety na fitsingerenan'ny andro nahaterahana izay azo antoka fa nandalo ny isan'ny kaloria, tavy ary vatomamy. Ohatra, amin'ny tranga misy antsika dia mazàna isika manao alatsinainy aorian'ny faran'ny herinandro izay nandisoantsika ny sakafo ara-dalàna.
Ho fanampin-tsakafo dia ilaina izany misotro ranon-javatra betsaka hamelona tsara sy hanamorana ny fanalana fako. Tsy maintsy manao farafaharatsiny ihany koa ianao fanatanjahan-tena intelo isan-kerinandro hahatratra ny fatiantoka matavy lehibe indrindra.
1 Sakafo maraina kaloria 500
2 Sakafo fisakafoanana kaloria 500
3 sakafo hariva
4 Ohatrinona ny laninao amin'ny sakafo kaloria 500?
5 Menus ho an'ny sakafo 500 kaloria
5.1 Sakafo maivana
6 Fiheverana amin'ny sakafo 500 kaloria
Sakafo maraina kaloria 500
Ny sakafo maraina amin'ny sakafo kaloria 500 dia misy sombina malala-tanana mananasy voajanahary. Amin'izany fomba izany dia manampy fibra betsaka izahay izay hanampy antsika handeha ho any amin'ny trano fidiovana tsy tapaka. Ho famenon'ny fibre dia azonao atao ny mampiditra «infusion» izay hanampy anao hanome fahafaham-po anao raha toa ianao ka zatra manao sakafo maraina be dia be sy cookie kely 3.
Amin'ny misasakalina maraina dia hanana fampidirana sy paoma iray hafa isika. Tsy manana kaloria firy izy ireo ary manome vitamina ilaina betsaka. Izy io koa dia misy fiantraikany mahavoky izay mamela antsika ho tonga amin'ny fotoana fisakafoanana tsy misy fahatsapana hanoanana izaitsizy.
Sakafo fisakafoanana kaloria 500
Ny sakafo lehibe indrindra amin'ny andro dia misy atody nandrahoina 2, a lovia salady voatabia, tongolo, karaoty ary broccoli. Ho an'ny tsindrin-tsakafo dia hanana paoma hafa isika.
Amin'ny tapaky ny tolakandro dia haka infusion hafa isika hisafidianana izay tiantsika indrindra.
Amin'ny maha-tsakitsaky anay dia haka yaourt skim (1) (raha tianao ho afaka mamy) ianao ary hiaraka aminy amin'ny fampidirana.
Tsy isalasalana fa tsara izany ohatra atoandro ho an'ny sakafo kaloria 500.
Amin'ny sakafo hariva dia hanome fahalalahana bebe kokoa isika, hahafahantsika misafidy Hena mahia 100 grama (akoho na vorontsiloza) namboarina na karazana trondro namboarina. Ho famenony dia hanana ampahany kely amin'ny salady na legioma voatoto ary fampidirana.
Manantena izahay fa ity sakafo kaloria 500 ity dia mety aminao tsara ary hahatratra ny tanjonao fihenan'ny lanja amin'ny fomba voafehy sy salama.
Ohatrinona ny laninao amin'ny sakafo kaloria 500?
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny lanja mety laninao amin'ny sakafo kaloria 500, miankina amin'ny metabolismao sy ny fanatanjahanao miaraka aminy izany.
Sakafo hypocalorika be izy io ary afaka mamoy 3 kilao ianao ao anatin'ny herinandro raha tanterahina amin'ny taratasy. Raha te hihena haingana ianao dia tsy tokony halainao ity sakafo mampianatra anao ity ny fomba mampihena lanja ao anatin'ny iray andro.
Menus ho an'ny sakafo 500 kaloria
Hentitra tokoa ny sakafo, fa raha ny fahitana ny valiny dia tokony hanaja ny taratasy ianao. Zava-dehibe tokoa ny infusions, satria manampy anao hampitony ny fahazotoan-komana sy hanafaingana ny fandoroana tavy, indrindra raha misotro dite maitso ianao. Tokony entina tsy misy siramamy fanampiny izy ireo, na tsia, miaraka amin'ny zava-mamy voajanaharyl.
Amin'ity sakafo ity dia mihena haingana ny lanjanao, na izany aza, manoro hevitra izahay ny haka fanafody fanampiny izay manakana ny fahatsapana ny fahazotoan-komana.
Ireto misy ohatra roa hafa amin'ny menus hanaovana ny sakafo.
Atsofohy amin'ny tsiro miaraka amin'ny zava-mamy. Izay rehetra tadiavinao.
Kafe mainty, tsy misy ronono ary tsy misy siramamy. Afaka manampy mamy ianao.
Atsofohy sy mofo kely toast mofo fenoina miaraka amin'ny voatabia na jamam kely. Mitandrema, ny toast dia tsy maintsy ho mofo kely sy fenoina satria a sakafo tsy misy mofo.
Atody roa nandrahoina mafy sy ny habetsaky ny episy tadiavinao, andrahoina, andrahoina na manta.
Tono akoho na trondro voatono miaraka amin'ny zava-manitra sy voatabia ary salady salady. Paoma ho an'ny tsindrin-tsakafo.
Atody nandrahoina mafy, karaoty misy tsipika ary fromazy Gruyère.
Hena mena mitono 150 grama sy anana maitso matsiro voahosotra miaraka amin'ny menaka oliva fanampiny iray sotro.
Hama masaka 150 grama ary salady maitso.
Makedôda namboarina sy yaourt skimmed.
Atody roa nandrahoina sy salady karaoty.
Fiheverana amin'ny sakafo 500 kaloria
Ity sakafo ity tsy natao ho tanterahina mandritra ny andro maro misesy, fa kosa fianana fianjerana fa tamin'ny andro nisakafoanan-kanina be loatra isika.
Manolo-kevitra ny handany infusions mafana ary hanao fanazaran-tena amin'ny andro hanarahana ny fitondrana, ka mahatonga ny fahaverezan'ny tavy.
Satria sakafo tena mametra izany ary mitazona sakafo be dia be hafa mba hiasa tsara amin'ny vatana, dia tsy tokony hataontsika mandritra ny fotoana maharitra izany. Tokony hatao iray andro isan-kerinandro fotsiny izy io. Raha niharan'ny herisetra izy eny, mety hisy ny fijaliana amin'ireo natahotra vokany ary avereno ny kilao rehetra very.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo 500 kaloria
Ny marina dia tsy fantatro hoe ohatrinona ny kaloria tokony hohaniko isan'andro .... Ahoana no hahafantarako mba tsy hitombo lanja sy hihazonana ny tenako ..
Elvia dia hoy izy:
Hiezaka ny hanao izany aho, antenaiko fa mety amiko izany
Mamaly an'i elvia
Salama, voalohany indrindra, misaotra an'ity sakafo ity, faharoa, efa iray volana no nanaovako izany satria nitambesatra tamin'ny telopolo kilao aho ary nihinana sakafo kaloria dimam-jato nandritra ny iray volana, ary very kilao dimy, izao aho Te hahafantatra raha manana olon-kafa koa ianao, na afaka soloiko sakafo hafa. Misaotra anao.
ry namako, tsy tsara ny manao sakafo kaloria 500 raha tsy misy fanaraha-maso satria mihetsika ny vatanao ary manomboka mitahiry tavy ho tahiry fa tsy manala azy ity sakafo ity dia henoko bebe kokoa ho an'ireo olona manao fitsaboana amin'ny hcg nilatsaka izay tokony hihena. lanja ary miasa amin'ny fanesorana "tavy ratsy" ary manampy anao hitazona angovo.
Aleo ianao manatona olona iray satria matavy be ianao ary tsy mahasalama izany.
Amelia dia hoy izy:
Ny fihinanana sakafo tsy misy fanaraha-maso dia mahafaty, ary misy fihenan-tsasatra noho ny lanja very sy ny fahasarotana amin'ny metabolika Facebook.com/vivriproductos
Valiny tamin'i Amelia
salama maraina ... ny marina manaitra ahy amin'ity sakafo ity ... tao anatin'ny 5 andro very 5 kg aho, ny tsiambaratelo dia ny tsy fihinanana bebe kokoa! ampy fotsiny sy ilaina! Ary raha manampy azy ireo izany dia tsara kokoa ny mandeha an-tongotra adiny iray na mahery amin'ny hafainganam-pandeha avo, na jogging 45 minitra nefa tsy very ny gadona, ka may ny tavy be loatra amin'ny andro, manome torohevitra ihany koa aho hanao hetsika ara-batana antsasak'adiny maraina alohan'ny sakafo maraina satria foana ny vatana ary mihombo ny fizotran'ny tavy ...
Ary farany, raha mitady sakafo tsara sy mahavelona izay tsy mampitombo ny tavy amin'ny vatanao ianao dia manoro hevitra anao aho fa tsy mihinana zavatra be dia be hisafidianana salady tsara amin'ny mitataovovonana, (atody, salady sy voatabia) na ron-kena misy voatavo. na zavatra toa izany! ... tsy misy paty na mofo, cookies raha azo atao ary aza mihinana zava-mamy !!! ... ny zava-dehibe indrindra. ny siligaoma (siligaoma) dia fialamboly tsara, mitazona ny vavanao ho be atao sy tsy misy hanoanana, ny zavatra tsara indrindra momba izany dia ny tsy fahampian'ny kaloria! ... famihinana ho an'ny rehetra, manantena aho fa nanompo sy nahatadidy fa «ianao aza mila mifamono akory mba hahavery lanja »mametraka fotsiny ny sitrakao sy ezaka kely fa tsy avy any an-danitra ny zava-drehetra! ...
aza lotoina ny fomba ahafahanao manao ireo sakafo ireo ihany
Nanova ny metabolisma izy ireo satria ny andro hampijanonany manao azy io, dia hihabetsaka indray izy ireo, ny zavatra mahomby indrindra dia ny fanatanjahan-tena.
ary manandrana mihinana salama araka izay azo atao.
Ny tsiambaratelon'ireo manify dia rehefa mahatsapa fa voky izy ireo dia mijanona tsy mihinana intsony na inona na inona avelany eo ambony lovia ary isika olona matavy dia tsy mijanona mijery ilay palto li pio iray izay efa afa-po sahady isika fa tsy mila mandratra ny fitafiana ary avelao mbola ho be harena io, ity no torohevitra tsara indrindra azoko omena anao sy hihinananako ny zava-drehetra fa amin'ny antonony sy amin'ny fanatanjahan-tena
Valio i doris
karina ruiz dia hoy izy:
Hitanao io, tsara kokoa ny mandray azy, tena, amidiko izany, avy any Mexico aho, afaka mihinana sakafo mahasalama sy kapsily iray isan'andro ianao izay hanampy anao hifehezana ny hetahetan'ny tavy sy zava-pisotro malefaka.
Mamaly an'i karina ruiz
Ny vdd andramako azy manomboka rahampitso 30 martsa ary andramako amin'ny herinandro hahitako hoe ohatrinona ny laniko very, ny vdd dia raha mila mihena aho satria milanja 74 kilao ary tsy refesiko ihany 1.60mts ary matavy loatra sy atavy matavy aho, noho izany dia hanandrana aho, fantatro fa mandeha izany raha entina mankany amin'ny taratasy ary te-hanao izany aho, ary avy eo raha tratrako ny tanjoko hahavery 14 kilao dia hanaraka aho ny drafitry ny 1600 0 1900 kaloria hitazonana ahy !!!!
Mamaly an'i margaritaa
Nandany sakafo 500 kaloria aho nandritra ny 8 andro ary very 4 kilao.
Aorian'ny 1000 ary miaraka amin'izany dia nitahiry kilao 9 aho, ary tsy niverina.
Ny zavatra tsara dia zatra mihinana kely ianao, ka sarotra ny andro voalohany, dia zatra tsy mihinan-kanina.
samy dia hoy izy:
Salama, mandeha any amin'izany sakafo izany aho, xk mila kilao vitsivitsy monja aho, ho an'ny bebe kokoa dia manana 5 kilao aho.
Inona avy ireo cookies rano maivana? Misy marika manokana sa inona?
Ampio aho raha fantatrao, misaotra anao, holazaiko anao ny fandehan'ilay sakafoko tao anatin'ny herinandro na roa.
Mamaly an'i samira
Hanomboka sakafo faran'izay tsara aho amin'ny Alatsinainy izao satria mila very haingana 12 kilao aho ka andao hiasa any ary holazaiko anao ny fandehany
alexxa dia hoy izy:
Salama, 1 herinandro no nanaovako an'io sakafo io ary very 3 kilao aho, tsy ratsy mihintsy izany ary tsy noana ianao rahampitso fa hanao paoma x 5 andro aho ary avy eo manohy izao dia mila very 12 kilao mandritra amin'ity volana ity, xaoo, lazaiko anao
Mamaly an'i alexxa
Hiezaka hanandrana an'ity sakafo ity aho na dia mahafaty kely aza izany, hampahafantariko anao ny fandehany, veloma
Mamaly an'i teresita
inona ny atao hoe infusion? inona no tokony ho izy? azonao hazavaina amiko ve? salama!
Fabi dia hoy izy:
Salama!! Hanandrana an'ity sakafo ity aho, tsy dia mijaly izany, ahoana raha manoro hevitra an'ireo izay te hanaraka azy aho, miovaova arakaraka ny sakafo, aza miantehitra amin'ny menio etsy ambony fotsiny, izay mety hanampy anao betsaka dia ny fikarohana ny internet ho an'ny kaloria latabatra avy amin'ny sakafo, ary amin'izany, mamorona menio mora ampiasaina amin'ny kaloria mitovy amin'izany, ny zava-dehibe indrindra dia ny fihinanana vokatra manome anjara biriky lehibe amin'ny hydration, minoa ahy fa mila izany ianao satria tsy ny vatanao zatra ambany kaloria fandraisana anjara, indraindray mety ho mankaleo na reraka be ianao, ampio ity sakafo ity amin'ny fanatanjahan-tena farafahakeliny in-3 isan-kerinandro ary raha tokony ho very 2 kilao ao anatin'ny herinandro dia mety hahavery hatramin'ny 4 ianao fa tsy maintsy tsy miovaova, aza avela ho lavo amin'ny The fakam-panahy toy ny mofomamy sôkôla, na ny sombin-pizza sy ireo zavatra rehetra izay tsy ilaina amin'ny vatanao, azonao atao ny mihinana azy ireo indraindray Manoro hevitra anao aho hanararaotra ny alahady, izany no ataoko ary mandritra ny fotoana rehetra herinandro izay manahy be momba ny zavatra hohaninao ianao satria avy eo dia mahazatra ny manome nenina «naninona no nohaniko? Rehefa avy nandany ny kilao fanampiny ianao dia hahatsapa ho mirehareha amin'ny tenanao sy manana fahatokisan-tena bebe kokoa noho ny olon-kafa. Izay pataloha izay tsy nety dieny izao dia ho malalaka, sa tsy tsara ? ……. Izay no antony anomezako anao ny fanampiako rehetra sy amin'izay ilainao, araho fotsiny aho ao amin'ny twitter: fabylopez_JBlov bye tandremo ny tenanao …… Manantena aho fa hitanao fa mahasoa ny torohevitro ..
Mamaly an'i fabi
xime dia hoy izy:
Androany aho dia nanomboka tamin'ny sakafo ara-tsakafo ary avy amin'izay tsapako fa nandany kaloria 350 fotsiny aho ary tsy noana loatra, mahafinaritra izany sa mety ho ny vavoniko zatra mihinana kely dia manantena aho fa hiasa ho an'Andriamanitra ny sakafonao
Mamaly an'i xime
Salama, androany no nanombohako ny sakafo, toa be super tamin'ny 12 andro no ilazako anao ny tal
Batman dia hoy izy:
Ity sakafo ity dia tena lozabe, ary amin'ny fomba tsy dia ilaina ihany koa.
Ny olon-dehibe mahazatra dia mitaky kaloria 2000 eo ho eo amin'ny kaloria, ary ny olona matavy be dia mitaky kaloria 3000-3500 mora foana. Miresaka momba ny olona ara-dalàna isika izay tsy mihinana afa-tsy 25% amin'ny vola ilainy hitantanana ny vatany.
Mahatonga antsika hihena ve izany? Eny, ny valiny dia, mihena haingana ianao, nefa masiaka be, izay mety hiteraka aretim-po, ankoatry ny fihenan'ny proteinina an'io sakafo io dia ambany, ka mahatonga ny vatana hamoaka proteinina avy amin'ny hozatra, (izay azo antoka fa mandray anjara amin'ny fiheverana ny fahaverezan'ny lanja) miteraka fihenan'ny dieter.
Inona no olana lehibe? Hidina be ny metabolisma, ka hitranga izany, rehefa miverina misakafo ara-dalàna ianao, manoloana ny tsy fahampian'ny angovo naharitra 12 andro anao, dia hanapa-kevitra ny vatana hitahiry ny angovo lany rehetra, ka mahatonga ny antsoina hoe rebound effet, izay misy ny fahaverezana lanja indray ary na dia ny fahazoana kilao vitsivitsy aza.
Tena mampalahelo ahy ny mamoaka an'ity sakafo ity nefa tsy manazava tsara ny loza mety hitranga amin'izany.
Valiny tamin'i Batman
Salama fanontaniana iray, inona ny cookies amin'ny rano? misaotra miarahaba ..
citla dia hoy izy:
Miala tsiny amin'ny tsy fahalalana ... fa misy olona afaka miteny amiko ve hoe inona ilay "fampidirana safidy"?
Mamaly an'i Citla
infusion heveriko fa toy ny dite sa tsia?
Anya dia hoy izy:
Ny "fampidirana safidy" dia midika fa afaka misafidy ilay fampidirana tadiavinao ianao, kanelina, lavanila, sns.
Nampifangaroiko ity sakafo ity amin'ny sit-up isan'andro isan'andro ao an-trano, ary amin'ny fanazaran-tena kely, toy izay ny fiakarana ascenseur mankany an-tranonao ... ny fiakarana ny tohatra, sy ny toy izany, ary afaka 12 andro dia vitako midina. 7 kilao.
Mazava ho azy ... avy eo tsy maintsy mihinana sakafo voalanjalanja ianao ... satria raha tsy izany dia REBOUND EFFECT ary veloma ny ezaka.
Valiny tamin'i Anya
Kivy be aho ka nanao tsy nahy ity sakafony ity satria tsy te hihinana na inona na inona ... very lanja be aho tao anatin'ny fotoana fohy! : Ie fa tsy izany no fomba tsara indrindra hampihenana lanja heveriko ...
Ny infusions dia ny dite, chamomiles, izay ahitra apetraka ao anaty harona sivana, andao handeha! Ary heveriko ihany koa fa azo takaloina amin'ny kafe izay tsy manana kaloria firy ary misy antioksidana be dia be ... ny mofomamy rano no tsy manana afa-tsy sira, lafarinina ary rano amin'ireo akora ao aminy: Eny, saingy mieritreritra aho fa ny pita na ny mofo dia arabo mifangaro ...
Ivana de la Jara dia hoy izy:
Ny fahaverezan'ny 1 kg mahery isaky ny emana dia ratsy amin'ny fahasalamanao, izany no antony nilazan'izy ireo fa manana olona matavy fa salama ary tratry ny aretim-po kokoa ... tsy matavy fa manao sakafo toa izao ary miaina fiainana mipetrapetraka. ..
Valiny tamin'i Ivan de la Jara
Amin'ny maha-mpanazatra manokana ahy sy mpahay sakafo iray dia hitako fa mahamenatra ny fisian'ireo antontan-taratasy toa izao, miorina amin'ny tsy misy, tsy dia atokisana ary mampidi-doza koa amin'ny fahasalamana.
Ny sakafo kaloria 500 dia tsy soso-kevitra na dia ho an'ny olona mandry am-pandriana aza, ny tsirairay dia manana metabolisma basal (fepetra takiana amin'ny vatana na dia tsy mamorona hetsika aza, ohatra, mandry eo am-pandriana 24 ora) izay tsy maintsy ampiana ny Burnout noho ny hetsika, ny vatana tsirairay dia miteraka fangatahana, na dia mipetraka miasa mandritra ny tontolo andro aza ianao, na tsy manao hetsika aza. Raha milaza fa amin'ny fihinana kaloria 500 dia mety mampihena ny lanjanao dia marina, fa marina koa fa aorian'ny roa andro dia ho hitanao fa tsy misy tanjakao ianao, herinandro iray ketraka sy reraky ny fahaverezan'ny adala (mazava ho azy fa tsy manana glucose ampy hieritreretana tsara ianao) ary iray volana ny tsy fahampiana mampiahiahy mety hitarika amin'ny fidirana.
Tena kivy mafy aho, ilay olona manana olana amin'ny hatavezina izay mankany amin'ny gym ary mangataka fiofanana manokana ho azy sy ny mpahay sakafo ho an'ny sakafo mifototra amin'ny fahasalamana sy ny vokatra tsara, dia azo antoka fa ho lava kokoa nefa ho marina, ao anatin'ny fetra ny mahasalama ary hitaona anao hanana antony manosika sy mahomby hanohizana ny tanjonao
Valiny amin'i AZUCENA
Stelly dia hoy izy:
Raha mpahay sakafo ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy mitovy daholo isika rehetra. Raha ny ahy dia 6 volana teo amin'ny sakafo ara-pahasalamana aho ary tsy namoy mihoatra ny 6 kg. Ankehitriny, irery aho, manao ny halaviran'ny scardale 700 kaloria ary very 5 kg isam-bolana, izay tokony ho very tamin'ny 1500 ary ny lanjako voalohany dia 45 kg! Manao aorobika adiny 3 isan-kerinandro aho ary misakafo amin'ny taratasy, hazavao amiko ny fomba tsy ahafahan'ny dokotera 2 hafa mampihena ahy, ary nataoko foana ilay taratasy.
Mamaly an'i Stelly
Tena tsara fa ny hevitra dia ny tsy mihinana mihoatra ny zakanao
Ny hevitra dia ny mihinana ny kely indrindra takian'ny vatanao mba ho velona hatrany ary minoa ahy, mihoatra ny 500 kaloria, voaporofo ara-tsiansa, tadiavo izany na aiza na aiza no tadiavinao
Ataoko io sakafo io nefa tsy hitako eto ary ankoatra aho dia manan-janaka roa miasa aho amin'ny alina ary efa niasa efa ho roa herinandro aho ary mahatsiaro tena tsara. Mieritreritra aho fa te hihena haingana. Raha izany no izy asaina manao io sakafo io, fa raha tsy misy hafa, alamino ny ora anananao. Ka afaka matory ampy izy ireo ary afaka mihinana vitamina koa (tsy manao an'io aho) very 3 kilao aho ao anatin'ny herinandro io kcka maro no tsy tia ny sakafo fa anjaran'ny tsirairay ny mahatsapa fa mahazo aina izy ireo fa raha te hihena haingana ianao dia very tavy sy hozatra bebe kokoa dia mila manao fanatanjahan-tena ankoatry ny sakafo !!!!!!
SORONIFITRA IZANY !! FA TSY MAINTSY ATAO EZORA ARY MBA HITIAVA FA TSARA ANAO !!
Valiny amin'i LOLA
salama ny marina tsy dia ekeko loatra ny karazan-tsakafo ... Reny manan-janaka roa aho ary ny marina tsy afaka mahazo ny lanjako ... Miaraka amin'ny 10 kilao bebe kokoa aho ... ka izaho handeha hanandrana an'ity sakafo ity aho, manam-pinoana betsaka ... Manantena aho fa mendrika izany sorona izany satria hitako fa efa nahavita maro ... miarahaba ny rehetra
Renata dia hoy izy:
Salama ny fahamarinana toa ahy tsara dia tsara ny sakafon'ny 500 kal rehefa nahita ny fanehoan-kevitra tsara toy izany miaraka amin'ny valiny tsara dia mieritreritra aho fa mendrika ny sorona rahampitso atomboko izany tsy haiko raha haiko izany dia hiezaka hitondra azy miaraka aminy aho mandeha ::: Efa nolazaiko anao ny niafarany
Mamaly an'i renata
Ary ahoana ny amin'ny fiatraikany?
manga maty dia hoy izy:
saingy mavesatra izany vokany izany .. mampiseho izany fa tsy mbola nijaly tamin'ny tena lanja be mihitsy izy ireo .. REHEFA MISY LEHILAHY REHETRA KILOSY REHETRA, ARY IZAO NO MIVAROTRA NY FITIAVANA "GODA" REHETRA KILO, uta .. sahirana ianao mihinana .. fa mamelona ny tenanao indray ianao !! INONA NO ATAO HOE Miverina MIHINANA MAZAVA? mila mamelon-tena ianao fa tsy mihinana .. EFA 8 taona IZAHO niaraka tamin'ny lanjako, misafidy sakafo 700 kaloria izay ataoko 30 andro, ary isaky ny 6 volana dia manao fifadian-kanina indray aho (3 andro miaraka amin'ny ron-kena, dite, ranon-kena) TSY Niverina niverina mihitsy aho mba hampanginana na hihinana hihoa-bidy toy ny taloha !! sa inona no antsoin'izy ireo hoe rebound? Rehefa be loatra ny olona iray na matavy loatra, tena tsy te-hamaky an'io indray ianao ARY MIANATRA TIAVINA NY TENANAO IZAO .. KA NY vokany REBOUND .. TSY MISY ambany kokoa IZAO? Ratsy ianao net ..
Mamaly an'i lasmangasdelmuerto
Ankoatr'izay dia ny vavony no mahazatra anao, rehefa misakafo tsara ianao dia lasa fahazarana ny kibonao ary mametra ny fetrany dia lasa kely kokoa
Eny, olona manana hyperobesity aho, nandeha tany amin'ny mpihinana sakafo ary nomeny ahy ireto sakafo manaraka ireto:
Sakafo maraina: kafe na dite tsy misy siramamy, tsy misy ronono ary tsy misy mpandoko fandokoana, sombin-tsakafo fitotoam-bary.
Sakafo atoandro: akoho namboarina miaraka amin'ny salady sy voatabia
Sakafo hariva: kafe na dite tsy misy siramamy na mpanabe, atody tsy misy solika ary voasary.
Ankoatra ny fandehanana an-tongotra 30 minitra isan'andro sy fisotro rano 3 litatra isan'andro.
Manaraka ny zava-drehetra amin'ny taratasy aho, saingy mahatsiaro mahatsiravina aho, reraka tontolo andro ary marary an-doha, ho tsara ve ny sakafo ara-tsakafo?
Nanome anao sakafo faran'izay tsara ny mpitsabo anao, manamarina fa manana accelerates metabolika ianao amin'ny sakafo maraina toy ny kafe, ianao (maitso mihombo, mena mandoro tavy) toast manome anao gliosida, voasary mandevon-kanina feno ary toy ny citrus rehetra manampy amin'ny fanetsehana ireo tahiry Fat, ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva dia misy proteinina sy legioma (ny karbaona aotra dia mamela anao amin'ny sakafo maraina ihany), ankehitriny ianao dia mahatsapa izany, misotro dite maitso bebe kokoa mba tsy handratra ny lohanao, ary hanome hery anao bebe kokoa izany amin'ny alàlan'ny tavy fitehirizanao. , dite flaxseed, dite birdseed, dite seleria, dite mananasy, dite kôkômbra, mifandimby amin'ireo infusions ireo dia ho hitanao fa nanjavona ny havizanao, 8 taona lasa izay very 48 kilao aho .. tsy mora izany FA NAHITA AZY. .n 5 volana.
48 kilao ?? tsara be !!! Mila very 57 kg aho, tontolon'ny kilao ity, saingy manana finiavana be aho, ny zanako vavy no antony manosika ahy ...
Paty aho, Miriam, miandry ny valinteninao aho fa tsy nalefanao taty amiko. Ankafiziko izany raha mamaly ny hafatra keliko ianao.
Fantatr'izy ireo fa tsara kokoa izany ary tsy mamela ny hampidina ambaratonga hafa ... SPIRULINE ALGAE
aza adino, ok.
miarahaba ary hotahian'Andriamanitra ianao.
Mirage57 dia hoy izy:
Terliz23 dia hoy izy:
azafady mba mitandrema tsara amin'ny sakafo ataonareo .. tsy ny rehetra no mitovy amin'izay mety amin'ny tsirairay .. ny vatana dia mila ny otrikaina rehetra ary afaka mampihena ny lanjanao ianao nefa tsy mijaly loatra .. mihinana fotsiny ho an'ny mpanompo Andramo mihinana gliosida ambany amin'ny sakafo antoandro amin'ny sakafo hariva toy ny broccoli na salady legume. ny fahalemena dia midika fa ny vatana tsy mahatohitra angovo ampy ary mety hiteraka tsy fahampian-dra na toe-javatra hafa .. manomboka hanolo sakafo voahodina ho an'ny voamadinika iray manontolo, mihinana voankazo toy ny mananasy, poars, paoma maintso, voaroy ary maizina kokoa ohatra bluberry. manandrama mihinana sakafo voajanahary na biolojika. toy ny isaky ny adiny 3 ka hatramin'ny 4 ary misotro rano be .. ny dite maitso sy ny dite mena dia afaka manampy ny fizotrany. Manantena aho fa hanampy anao ity fampahalalana ity .. efa nanao in-4 isan-kerinandro farafahakeliny ianao ary mino ahy fa hihena ianao, raha tsy misy ny vatanao dia fanomezana avy amin'Andriamanitra noho izany antony izany dia tokony hikarakarantsika azy ... ary tsy hitondra azy amin'ny fijaliana, hijaly ianao ary hijaly ny vatanao.
Kiri01 dia hoy izy:
Salama afaka omenao ahy ve ny sakafo fanao izay nahaverezana kilao x be dia be ...
Valiny amin'i Kiri01
Ahoana no nataonao mba hahafoana kilao maro, ankoatry ny finiavana, inona ny sakafo ataonao?
Chraga5 dia hoy izy:
Lazao ahy ny fomba nahaizanao nanary lanja be tao anatin'ny fotoana fohy, mila miala 35 kilao aho ary mbola tsy vitako izany
Valiny amin'i Chraga5
Sc_arlet_2006 dia hoy izy:
namako, azonao omena ahy ve ny sakafonao? mila mihena aho ao anatin'ny 5 volana ary farafaharatsiny 4 kilao
Valiny amin'ny Sc_arlet_2006
Salama Paty! Ary manao ahoana ny sakafonao ???… zavatra kely, azonao atao ve ny milaza amiko mandra-pahoviana? Moa alaina isan-kariva ve ny atody?… .Koa lazain'izy ireo fa ratsy loatra ny atody…… hoy ianao amiko!
Valiny amin'i MARI
Salama Mari, salama tsara amin'ny sakafo aho, androany nandeha tany amin'ny mpamatsy sakafo indray aho ary very 3.800 kg tao anatin'ny herinandro monja !!!! Nahagaga fa nahita sakafo kely aho, ary mahatsiaro ho mahafinaritra. Lazaiko aminao fa handeha ho any amin'ny mpahay sakafo isan-kerinandro aho handinihako ny fivoarako amin'ity indray mitoraka ity dia avelako mandritra ny herinandro iray ny sakafo mitovy aminy ary nilaza tamiko izy fa raha manohy toy izao aho dia hampitombo ny barako ho an'ny angovo sy ronono na yaourt. ... ny atody isak'alina Rehefa misakafo hariva misy kafe sy voasary dia mamporisika anao aho hanao ny sakafo raha mijaly amin'ny hyperobesity ianao ary raha manaraka ny zava-drehetra amin'ilay taratasy ianao dia ho gaga amin'ny valiny, ary amin'ny herinandro ho avy aho lazao aminao ny sakafo hafa ... patys@live.com … Miarahaba
Ufff, heveriko fa hisoratra anarana amin'izany sakafo izany… mila very 10 kilao aho: (… andao jerena raha miasa ho ahy ny finiavako!
Salama Pati, Miriam aho, tiako ny sakafonao, saingy fantatrao fa mahatsapa ho olona kivy aho, mieritreritra ve ianao fa hahazo valiny haingana, ary ny lanjako dia toy ny 105 kilao, ary zavatra hafa koa ny atody miaraka amin'ny zavatra rehetra ary feno izy ary vitako ny manjaitra sy irery. legioma toy ny gitomate sy tongolo.
Vasty001 dia hoy izy:
Inona no atao hoe fampidirana? Ary ahoana no fomba fiomanana? MISAOTRA
yessi dia hoy izy:
ny fampidirana dia dite ...
Na iza na iza dia infusion
Stella dia hoy izy:
Salama Miriam, aza kivy, ataovy izay tsy hataonao noho ny majika ny sakafo anaovanao kilao, ny zavatra rehetra dia tsy tapaka ary tompon'andraikitra, raha miala amin'ny sakafo ianao indray andro dia tohizo ireto sakafo manaraka ireto, natomboko tamin'ny 103 ary tao anatin'ny 2 volana dia very 10 kg aho ary mikasa ny hanohy mandra-pahatongan'ny fahaverezan'ny 30 aumn fanampiny izay hitondra ahy herintaona, faharetana, ezaka ary finiavana be! vintana ... Stella
Gloria Ojeda dia hoy izy:
Salama PATY, manantena aho fa hanohy amin'ny fomba mahomby ny sakafonao. Hiezaka ihany koa aho hanaraka azy, TSY te-hanontany anao zavatra iray fotsiny aho, afaka mihinana CHILE, NY MARINA ny sakafo tsy misy CHILE TSY fantatro. MISAOTRA ANAO
Valiny tamin'i Gloria Ojeda
Tsy afaka mihinana chilean ianao satria hampitombo ny kaloria 500 izany
raulito dia hoy izy:
Manga ny atody
Mamaly an'i raulito
Mario Alberto Mora dia hoy izy:
Fandraisana anjara soa Paty… Misaotra tamin'ny fizarana.
Valiny tamin'i Mario Alberto Mora
nssa dia hoy izy:
Heveriko fa nifototra tamin'ny DIET HCG izany ... Mieritreritra aho fa tokony hitady azy io ianao hanampiana anao amin'ny hery. Manantena aho fa hanampy.
Valio amin'i Nssa
Gau dia hoy izy:
Inona no atao hoe fampidirana?
Mamaly an'i Gau
Angieegood dia hoy izy:
Raha mahatsapa ho tsy tsara ianao dia tsara kokoa ny manatona dokotera tsara arahin'ny mpitsabo aretin-tsaina chiica, tsy ara-dalàna izany!
Mamaly an'i Angieebueno
Salama Paty, hitako fa ny msg-nao dia 2 volana lasa izay, saingy zara raha hitako, tiako ho fantatra hoe manao ahoana ianao, ohatrinona no vitanao nidina, manao sakafo 500 kal koa aho nefa mandray nilatsaka ny hcg, mandraka ankehitriny dia salama tsara aho, natomboka tsy nilatsaka ny sakafo ny vdd hehehe, nefa na izany aza dia efa very 14 kilao aho, tao anatin'ny iray volana sy tapany dia 93 taona aho izao ary milanja 79, 1 herinandro lasa izay Nanomboka nanao sakafo aho hehe, vao omaly aho no nilanja ary izaho ihany eh very 1 kilao, saingy very fandrefesana marobe aho ary tena hafa mihitsy ny vatako, tiako ho fantatra ny fandehany, maninona aho no mamarana ny rotsako ary izaho te hahafantatra raha tsy maninona ny manohy manao sakafo tsy misy latsaka hehehe, henjana ny valinteninao ary manaova hafaliana, fantatro raha azontsika atao. Misaotra !!!
Sirena75 dia hoy izy:
Nanomboka androany aho, mila mihena 20 kilao! Tena mazoto aho, manantena ny tsy handà!
Valiny amin'i Sirena75
yancygabrielamoreno dia hoy izy:
Hey, ary nanao ahoana ianao, olona mitovy toe-javatra aminao aho, kilao maro hafa, ary nanandrana zavatra an-tapitrisany aho. Valio ny valiny raha manosotra anao aho.
Valiny tamin'i Yancygabrielamoreno
Rocio Gutierrez dia hoy izy:
Salama, manana dokotera manokana momba ny hatavezina, ny lanjany be loatra ary ny anti-antitra aho, tsara tokoa ny marary very hatramin'ny 45 kilao ao anatin'ny 10 herinandro monja, nefa tsy mihena maso, ny mifanohitra amin'izany, mamelombelona ny marary, satria hormonina ny hatavezina. Ny olana dia tsy ny fijanonan'ny fihinanana fotsiny satria tsy hanatsara izany dia ny olana hormonina, miantso ny 3186637231 izay liana amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ireo liana
Mamaly an'i rocio gutierrez
BettyMartell dia hoy izy:
Salama aho fa tsara aho ary ny fanontaniako dia manao ahoana ny maharatsy ny kalisy izay mifanerasera aminao amin'ireo sakafo 500 CAL. XKA IANAO IHANY NO MITONDRA 15 KARAZANA X VOLANA SY RAHA SADY Reraka SADY TSY MBA MAHAINA.
Valiny tamin'i Bettymartell
x fabor Mieritreritra aho fa mila antony manosika bebe kokoa ary x bebe kokoa K tsy afaka mampihena lanja sy x raha misy zavatra tsy ampy amiko dia olona mitazona ranon-javatra be dia be ny olona afaka manampy ahy ????????? ?????? ????
Anjely_river08 dia hoy izy:
Azonao atao ve ny misotro ronono vera iray maraina?
Valio amin'i Angel_river08
marissa silva angle dia hoy izy:
Salama, Marissa no anarako, manana kilao 15 kilao aho, aka manomboka sakafo aho, momba ny fihinana voankazo madio sy sombin-tratra isan'andro, manao 3 minitra amin'ny bisikileta aho nefa kivy aho te-handroso bebe kokoa! Inona koa no azoko atao 🙁
Mamaly an'i Marissa silva angulo
Stephanychivis dia hoy izy:
Te hanao anio aho fa tsy azoko ny tianao lazaina amin'ny infusion, azonao hazavaina amiko ve ??? Ary vitako izany na dia mampinono aza aho, satria manana cesaria aho, tsy afaka nanao fanatanjahan-tena fa nahazo kilaometatra 30 kilao tamin'ny zanako kely aho.
Mamaly an'i Stephanychivis
vg dia hoy izy:
Mety hampidi-doza ny fampihenana ny fihinanana klôro amin'ny kaloria 500, ny kaloria dia mila kaloria farafahakeliny hiasa, ary io isa io dia miankina amin'ny taonantsika, ny halavantsika ary ny lanjantsika. Aza mandeha amin'ity sakafo ity raha tsy fantarinao aloha hoe ohatrinona ny kaloria ilainao. Matotra ny risika.
Ny fampihenana ny 25% ny kaloria tadiavin'ny vatantsika dia mihoatra ny ampy hampihena ny lanja amin'ny hafainganam-pandeha tsara, nefa tsy very fandanjana ary tsy hampidi-doza ny tenantsika.
Tsy misy sakafo fahagagana, raha te hihena isika dia tsy maintsy manaiky ny antony mahatonga antsika hahazo lanja voalohany, diniho ny sakafontsika sy ny fampihetseham-batantsika. Tsy dia sarotra izany, ny zavatra sarotra dia ny manaiky ny lesontsika, ary ny andraikitra ananantsika amin'ny sakafontsika.
Nilanja 205 kilao aho izao, milanja 145 aho izao, mbola mila very 20 kilao vao faly (lehilahy efa ho roa metatra aho, efa ela ny dingana (hatreto dia 28 volana) fa ny vokany dia misy faly sy mirehareha, tsy maintsy nanambatra sakafo 2300 kaloria tamin'ny fomba fiasa somary sarotra aho, saingy mendrika izany, ary mahatsiaro ho tsara aho, ankoatr'izay dia azoko antoka fa afaka mitazona ity fiainana ity mandritra ny androm-piainako aho, midika izany fa tsy hamela ny tenako ho matavy intsony aho.
Mitandrema, ary manantena aho fa hitandrina kokoa ny tonian-dahatsoratra amin'ity pejy ity rehefa mandefa torohevitra mampidi-doza toy izany.
Valiny amin'ny and
Tsia, mihinana kaloria 500 aho ary amin'ny herinandro voalohany ny hany zavatra ratsy dia ny aretin'andoha, saingy niaraka tamin'ny isan'ny kaloria isan'andro isan'andro aho nandritra ny 5 herinandro, na dia mifandimby aza ny sakafo mba tsy lasa monotonous aho, ary ao anatiny aho. fa, mandraka androany, very 15 kilao aho ary mahatsapa tena tsara aho, mieritreritra aho fa miankina amin'ny olona tsirairay izany, marary matavy loatra aho ary betsaka ny tahiry matavy, ka olona iray izay Ny lanjan'ny lanjan'ny 10 kilao dia tsy mitovy amin'ny iray hafa toa ny lanjako 60 be loatra ...
Nilaza ny mpandinika ny sakafo ahy fa ao an-tsaina ny zava-drehetra, mila mandamina ny tenanao ianao mba haharetanao sakafo henjana toy izany, amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny dingan'ny famonoana detoxification aho, ka ao anatin'ny 4 herinandro dia hampiakatra 200 kaloria bebe kokoa ny mpamatsy sakafo ahy, sns 2 volana mandra-pahafahanao mandany kaloria 1800 isan'andro, izay no sakafo hanina mandritra ny androm-piainana! :)
Rak dia hoy izy:
Izaho dia olona nametraka ahy tamin'ny sakafo fianjerana hatramin'ny 300 kcal manao fanatanjahantena 3 miaraka ary mianatra, nilanja 120kg aho ary tsy namoy lanja, fantatro ny fihinanana sakafo sy ny fanaovana fanatanjahan-tena mafy ary bebe kokoa aza rehefa eo ianao tanora
Ny sakafoko amin'izao fotoana izao dia 900 kcal ary manana fanatanjahan-tena 1 sisa tsy hahavery 30 aho mba tsy ho tratry ny risika, hoy ny mpitsabo ahy fa tokony hihinana bebe kokoa aho mandritra ny fandidiana kibo, tsy azoko
Mamaly an'i rak
mile_riera dia hoy izy:
Salama, izaho dia Mile, mila sakafo aho mba hahafoana 15 kilao haingana be.
Mamaly an'i Mile_riera
AAAAAAH ARY MANAZAKA FANAZAVANA IHANY dia maika fa ho very lanja
Mieritreritra aho fa mahavita KILOS 15 IHANY
SOLEDADCABRERA dia hoy izy:
Salama, ny fanontaniako dia ilay fampidirana izay mety ho, satria misotro ihany aho dia vady ary raha izany dia milaza infusion, tokony hisotro zavatra hafa ve aho? Sa mety tsy voafetra ny vady misy zava-mamy? MISAOTRA ANAO
Valiny amin'i SOLEDADCABRERA
juliabrown05 dia hoy izy:
Salama ny anarako dia julia aho 27 taona aho nanana tuck 2 volana lasa izay nefa mbola somary saro-kenatra aho mila torohevitra hoe inona no karazana sakafo mety amiko
Valiny tamin'i Juliabrown05
hello paty ity no sakafo ataonao ary firy kilao no ho very, lazao amiko raha niasa ho anao izany azafady misaotra
Mamaly an'i fabiola
Emina Ishino dia hoy izy:
Inona no asa ara-batana atoro anao hampihena izay lazain'ity sakafo ity, raha intelo isan-kerinandro ... mety ho bisikileta na mandeha an-tongotra? fa mandra-pahoviana andro? bisikilety mmm tokony ho 3 minitra no hiasa ?? y20 firy litatra ny rano isan'andro manodidina ny 7 ??
Valiny tamin'i emina Ishino
faguii dia hoy izy:
Salama, tsara, izay atolotray anao, na dia olona toa ahy matahotra ny hitombo aza ianao dia holazaiko aminao ny zavatra nataoko 4 volana lasa izay: 4 volana lasa izay nilanja 210 kilao aho ary nanao sakafo fa izaho ihany no namorona azy! Raha fintinina, ny sakafo dia ny fihinanana cookie tsy misy na inona na inona amin'ny maraina, atoandro ary sakafo hariva! na amin'ny soda, kafe na rano voajanahary ary afaka manampy voankazo kely ianao, ny voankazo hafa isan'andro no tsara kokoa ary manao fanatanjahan-tena isan'andro 15 minitra dia manampy betsaka ary ankehitriny milanja 60 pounds aho! ary safidio ny andro izay hihinananao sakafo ara-dalàna! Manoro hevitra anao aho amin'ny Alahady fa aza mijanona manao fanatanjahan-tena, ataovy isan'andro 😀 mandeha izany
Mamaly an'i faguii
19 taona aho ary mihoatra ny 50 kilao. Vao nisoratra anarana ho an'ny gym aho. Mamporisika anao hanaraka an'ity sakafo ity ve aho ary raha izany dia ohatrinona no aleha isam-bolana?
amandagr92 dia hoy izy:
Tsy tiako na inona na inona na infusions na kafe na dite, soso-kevitra hafa hosotroina ??
Valiny amin'ny amandagr92
Talohan'ny tena nahasitrana ahy dia nihinana izay tadiaviko aho, nanao fanatanjahan-tena matetika ary tsy matavy. Rehefa nofoanana ny ekipako tamin'ny basikety dia nijanona tsy nilalao fanatanjahan-tena intsony aho ary tao anatin'ny herintaona sy tapany dia nahazo 10 kilao aho. Ankehitriny dia nanomboka nifehy ny sakafoko aho ary nanao antsasak'adiny teo amin'ny familiana isan'andro, fa bfff dia sarotra amiko ny mifehy tena sy manohy ny fanazaran-tena isan'andro.
Te hanana, raha misy mahalala, milaza amiko ny fomba sasany hampihenana ny lanjaniko haingana na mora kokoa nefa tsy mametraka ny fahasalamako ho azo antoka, mazava ho azy.
Salama ry olona avy any Nutridieta, Paty aho, rehefa avy nisakafo sakafo an-taonany dia nanomboka kaloria 500 aho nandritra ny 3 volana, mandra-pahatongako nihinana ara-pahasalamana, tamin'ny volana febroary 2012 dia nanomboka ny sakafoko aho ary nilanja 128 kilao, androany 10 oktobra . Aprily 2013, milanja 63 kilao aho :), tsy mora 65 kilao ao anatin'ny herintaona, tsy maintsy miaiky aho fa ny telo volana voalohany very teo anelanelan'ny 30 sy 32 kilao, satria nisakafo 500 kaloria aho, tao anatin'ny 9 manaraka volana, very 5 kilao isam-bolana aho, saingy afaka milaza aho fa tratrako ny tanjoko, na dia tsy eo amin'ny 5 kilao aza aho no tonga amin'ny lanjako tsara, tsy hanery ny vatako intsony aho, misakafo ara-pahasalamana ary manao spaoro 4 Indraindray isan-kerinandro ary indraindray aho mandany tena. Androany aho eto hilaza aminao fa raha vitanao dia ho vitako miaraka amin'ny fanampiana matihanina izany, saingy tsy misy pilina na zavatra hafahafa, raha ataoko ianao dia azonao atao ihany koa, mazava ho azy fa sarotra izany, saingy andefasako fehezanteny iray izay indray mandeha nilaza tamiko. mpahay sakafo, "mangidy ny faharetana, fa mamy kosa ny voany" ...
pililiana dia hoy izy:
Salama, azonao atao ve ny mizara ny fihinananao kaloria 500 indray, novakiako fa ny sakafo maraina dia kapoakan'ny dite ary sombin-mofo iray tritika, izany ihany ve? Toa tsy ampy proteinina izy io, fa raha manoro anao tsara ny dokotera dia mangataka anao aho hamaly ahy hanao izany, tahaka ny fahafantaranao fa amin'ny faharetana sy ny fanoloran-tena no ahazoana ny valiny marina, hiandry ny valinteninao aho . Misaotra anao
Mamaly an'i pilili
Salama, tsy ny sakafo rehetra no mety amin'ny olona rehetra. Ny tolo-kevitro dia ny mitsidika dokotera endocrine ary avelao izy hanova ny sakafonao amin'ny toetranao manokana. Misy ny sakafo mahatonga ny olona sasany hihena ary ny hafa kosa hahazo lanja. Tamin'ny fotoana nilazana tamiko fa nisy nanatavy letisy dia nojerena aho. Mandra-pilazan'ny dokotera ahy.
Ary ny zavatra niainako manokana dia raha tsy misy fanatanjahan-tena dia tsy misy na inona na inona atao. Miezaha mandeha mandeha miasa raha ao anatin'ny radius kilometatra raha avelan'ny fahasalamanao.
Betsaka ny zavatra nolazain'izy ireo fa ratsy ity sakafo ity, fa ny tsy fantany dia ny olona rehetra afaka manao izay tiany atao amin'ny sakafony! Ary ankoatr'izay raha misy te-hahavery ireo kilao rehetra ireo dia zony sy andraikiny izany. ary raha faly manify na manify izy dia raharaha tsotra fotsiny izany good
Mamaly an'i Jasmine
Gemmy dia hoy izy:
Salama, tiako ny namaky fanehoan-kevitra maro momba ireo sakafo miharihary ireo izay samy manana ny heviny. Lazaiko aminao fa efa nihinana sakafo kaloria 500 eo ho eo isan'andro sy rano 2 litatra aho, izay tsy nisotro akory taloha ary omaly vao nanomboka nankany amin'ny Gym ary very 6 kilao tao anatin'ny herinandro voalohany Milanja 112 aho ary 106 taona aho Ary tsy mbola noana na marary andoha, manantena fotsiny aho fa hitohy tsara ny zava-drehetra ary holazaiko anao 😉 Nanandrana zavatra maro aho, manana hypothyroidism koa aho ary mahita valiny ihany.
Valiny tamin'i Gemy
Salama, te ho very 10 kilao aho, milanja 55 aho ary 1.55 dia tsy tiako loatra ny vatako, hanandrana an'ity sakafo ity aho ary holazaiko anao ny fandehany, talohan'ny efa nanaovako sakafo fa betsaka kokoa tafahoatra, zara raha nihinana paoma isan'andro aho ary niharam-boina vokatr'izany satria nahita ahy ny ray aman-dreniko ary nanome ahy sakafo betsaka, very 6 kilao ary avy eo nahazo 13 !! Nampihoron-koditra izany, antenaiko fa hanao tsara aho
MC dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha mianatra mamaky REHETRA isika, satria ny zavatra voalohany lazain'ny lahatsoratra dia hoe 1 ANDRO ARA-HERINANDRO ihany no anaovana azy satria METY manimba ny sakafo ferana toy izany.
Ajanony ny hadalanao satria ny hany miasa mba hampihena ny lanja dia ny fananana HAIKA, herim-po TSY FANANAN-TENA mihinana, ary hanao OLOMPIASA isan'andro.
Valiny amin'i MC
Tamin'ny 1997 ny zazavavy iray antsoina hoe Lauren dia nandeha an-tongotra anaty ala, avy eo dia nanjavona tampoka izy, tsy nisy nahita azy hatramin'ny 2000 raha nisy tovovavy hafa antsoina hoe Mary nahita ny vatany ary nisy marika teo amin'ny tratrany nilaza hoe: tsy ampy hatsaran-tarehy izy »ary ankehitriny inona no vakio ity dia hiseho eo amin'ny fitaratraanao izy milaza fa tsy ampy hatsaran-tarehy ianao ary hamono anao! (tamin'ny fomba nahafatesan'ilay zazavavy antsoina hoe Mary taoriana kelin'izay) Mba hamonjy anao dia apetaho amin'ny hafa izany? Fanontaniana 10 fanampiny. MARINA IZAO satria tsy maty ny raibe na tsy catra bariaa ny renibeny tao amin'ny hatoka
Ny infusion dia dite, mety ho anana, voasarimakirana, kanelina sns.
Luciana dia hoy izy:
Atody 2 isan'andro ???
Mamaly an'i luciana
Herinandro fotsiny ny sakafo, avy eo miala sasatra mandritra ny 2 herinandro ianao dia afaka manao izany indray, avy eo manavao ny fomba fihinanao ary mitazona ny lanja very tsy misy fiatraikany mahery vaika, tsy maintsy manana finiavana ianao ary mahita fa mihena ny lanjanao dia mandrisika mandeha foana ianao. Mahereza, ity sakafo ity dia antony manosika fotsiny hianatra hihinana amin'ny kely mba hahazatra ny vatanao ... mirary soa ho an'ny rehetra ary andramo manandrana azy hamoy ireo kilao fanampiny ananan'ny olona iray. Avy eo azonao atao ny manampy amin'ny sakafo ambany gliosida ary hahatratra ny tanjonao…
Herinandro fotsiny ny sakafo, avy eo miala sasatra mandritra ny 2 herinandro ianao dia afaka mamerina azy io, avy eo mandanjalanja ny fomba fihinanao ary mitazona ny lanja very tsy misy fiatraikany mahery vaika, tsy maintsy manana finiavana ianao ary mahita fa mihena ny lanjanao mandrisika anao hanohy. Mahereza, ity sakafo ity dia antony manosika fotsiny hianatra hihinana amin'ny kely mba hahazatra ny vatanao ... mirary soa ho an'ny rehetra ary andramo manandrana azy hamoy ireo kilao fanampiny ananan'ny olona iray. Avy eo azonao atao ny manampy amin'ny sakafo ambany gliosida ary hahatratra ny tanjonao…
Dukan diet dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia io no iray amin'ireo sakafo sarotra atao indrindra. Mila manana finiavana be ianao ary manisa ny kaloria 500 amin'ny milimetatra. Ny tiako indrindra dia ny Dukan Diet. Tena tsara
Mamaly an'i Dukan Diet
SAMPY dia hoy izy:
Toa ahy ny sakafo fa tsy ho an'ny olon-drehetra ary misy koa ny fiakarana malaza, lazaiko izany miaraka amin'ny fahalalana ny antony, nanao sakafo an'arivony aho nefa tsy nisy vokany kely dia nijanona aho ary nitombo lanja indray, nianatra ny misakafo ara-pahasalamana ary tsy misy famerana miaraka amin'ny sakafo any an-toerana, tao no nianarako nahita ireo gliosida sy proteinina hohanina, inona ny habetsany ary manome ahy valiny, tsikelikely hitako fa miova ny vatako, mahatsapa ho tsara kokoa aho fanovana vitsivitsy monja. Na dia mitaky fangatahana bebe kokoa aza dia misy ny vokatra mitazona ireo refy ireo, toy ny an'ny enerzona. Manantena aho fa manampy olona izany
Valiny tamin'i Dolo
Salama, mahomby ity sakafo ity, miteny tsara aho, fa raha mila manana finiavana sy manao fanatanjahan-tena ianao dia very 7 kilao ao anatin'ny 8 andro.
Tamin'ny taon-dasa dia efa nataoko izany fa 800 ka hatramin'ny 1000 kaloria isan'andro miampy fanazaran-tena ary very kilao 3 kilao isan-kerinandro aho. Raha atambatra dia very 28 kilao aho nanomboka ny volana oktobra hatramin'ny janoary. Avy eo dia navelako ary nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Jolay dia tafarina 11 aho.
34 taona aho, mandrefy 194 sy lanjako izao 114.
Mazava ho azy, mitandrema amin'ny fanina fa mety hampidi-doza, fa mahomby.
TSARA AHO RAHA ENDIDO COCO GAMASIN'NY MASINA HANANA MASINA KA ENY SA TSY MARIA PAULA
LOLA BALMACEDA dia hoy izy:
Ny sakafo tsara indrindra sy ny fahaverezanao 1 KILO isan'andro no fihinan'ny siny, FA TSY manoro hevitra aho satria be dia be ny fijalianao, TSY MISY TSY MISY TSY MISY TSY METY NY MINITRA FA MINO AZO MAFY IZANY, NANORATRA NY FAHAMARINANA ARAKA NY 3 MONTHS I MITETRIKA 45 KILOS AOKA NY FISORATRA SY NY DINGANA FITSABOANA, TSY MAINTSY HANAO SORONIFITRA FA TSY HITANDRINA IZAY LEO.
Valiny amin'i LOLA BALMACEDA
Efa ho roa volana izao no nanao io sakafo io. Ataoko foana io andro amin'ny herinandro io. Ny fotoana vitsivitsy voalohany lasa mafy dia mafy ianao ary mahatsiaro tena noana sy misavoritaka, nefa avy eo lasa mora kokoa.
Satria tsy matavy aho ary tena mahomby ny vatako, sarotra amiko ny hahavery, kilao roa sy sasany fotsiny, fa raisiko ho zavatra maharitra izany.
Misafidy kojakoja hafa tiako kokoa aho, nefa manandrana tsy mihoatra ny kaloria 500 matetika. Malahelo ny ampahany amin'ny fampihetseham-batana aho, satria mandia dingana tena mipetrapetraka aho ary tsy manampy izany.
Araka ny filazan'ny olona hafa nanandrana azy dia mampihena ny filanao amin'ny ankapobeny, izay tena tsara.
Heveriko fa tena tsara ho antsika izay tsy manam-pahefana hanaraka ny sakafo isan'andro ary manampy amin'ny fitazomana lanja izany raha toa ka manana fironana hahazo lanja ianao.